बाहिरबाट घण्टी बज्नासाथ पढ्दै गरेको पत्रिका त्यही बैठक कोठाको टेवलमै राखेर हतपत ढोकाको छेउमा पुगेकी थिइन् अप्सरा। घण्टी फेरि बज्यो। अप्सराले ढोकामा भएको सानो प्वालबाट बाहिर हेरिन्। बाहिर दुवै हातमा झोला झुन्ड्याएर उभिएका थिए मनोरञ्जन। मनोरञ्जनलाई देखेपछि ढोका खोलिदिएकी थिइन् उनले। “ढोका खोल्न किन यति ढिलो?” मनोरञ्जनले अलि रुखो स्वरमा भनेका थिए। “अरू मान्छे पो कि भनेर नि” अप्सराले उत्तर दिएकी थिइन्। “म बाहेक अरू मान्छे पनि आउन थालेकी क्या हो?” हातमा भएको झोला टेबुलमा राख्दै भनेका थिए मनोरञ्जनले। “तपाईंलाई हिजोआज के भएको छ, कुन्नी! जहिल्यै त्यस्तै बाङ्गो कुरा गर्न थाल्नुभएको छ। तपाईंलाई थाहा छैन....। यहाँ पनि कोलोनीका मान्छेहरूले तपाईं र मेरो सम्बन्धलाई लिएर नाना थरिका प्रश्न गर्न थालेका छन्। अनेकथरिका शंका उपशंका हुन्छ उनीहरूका प्रश्नमा। भएन बेला कुबेला ढोका ढकढकाउने, ढोकाको घण्टी बजाउने, अनि मलाई देख्नसाथ आफु आफुमा कुरा गरेको जस्तो गरेर व्यंग्य हान्न थाल्छन्। तपाईंलाई त के छ र! रात बिताउने मात्र हो। मलाई यही ठाउँमा बस्नु छ। आजित भइसकेँ म थरीथरीका समस्याहरूबाट।” सोफामा बसेका मनोरञ्जनतिर हेरेर भनेकी थिइन् अप्सराले। “छोड यो सब गन्थन। बेकारको कुरा गरेर समय नफाल। जाऊ अब पिउने पिलाउने बन्दोबस्त गर ...., अँ बरफ पनि ल्याऊ।” लगाइराखेको जुताको लेस खोल्दै भनेका थिए मनोरञ्जनले। मनोरञ्जनका कुरा सुनेपछि एकछिनसम्म केही नबोलेर चुपचापै उनको अनुहारमा हेरेकी थिइन् अप्सराले। “अँ आज चाहिँ तिमीले त्यो पिङ्क कलरको नाइटी ल्याउनु। पिङ्क कलरमा त तिम्रो रूप धपक्कै बल्छ।” भान्सा कोठातिर जाँदै गरेकी अप्सरालाई हेर्दै भनेका थिए मनोरञ्जनले। केही बेरपछि अप्सरा किस्तीमा काँचका गिलास, जग, रिकाबी आदि लिएर बैठक कोठामा आइन् र किस्ती टेवलमा राखिदिएकी थिइन् । “तपाईं ड्रिङ्क तयार गर्दै गर्नुस् म लुगा फेरेर आउँछु।” अप्सरा बेडरुमतिर लागेकी थिइन्। “ओहो... मैले भनेको होइन गुलाबी रङमा तिम्रो सौन्दर्य कस्तरी खुल्छ!” भन्दै उठेर अप्सराको हात समातेर आफ्नो छेउमा बसाएका थिए मनोरञ्जनले। “थाहा छ तिमीलाई अप्सरा ..., मैले यो नाइटी पसलमा देख्नासाथ तिमीलाई सम्झेको थिएँ। मेरी अप्सरा यो नाइटीमा साँच्चै नै अप्सरा जस्तै देखिन्छिन् भनेर सोचेको थिएँ ।” अप्सरालाई अँगाल्दै भनेका थिए मनोरञ्जनले। “म धेरैदिन अघिदेखि तपाईंलाई सोध्न चाहन्थे, किन–किन सोध्न सकेकी थिइनँ तर आज त म तपाईंबाट मेरो प्रश्नको उत्तर सुनेरै छोड्छु।” अप्सराले भनेकी थिइन् मनोरञ्जनसँग। “पख.. पख! पहिले म पनि लुगा फेरेर आउँ अनि मजासँग ड्रिङ्क गर्दै बात गरौंला है त ...।” मनोरञ्जन उठेर बेडरुममा पसेका थिए। केही बेरपछि मनोरञ्जन बैठक कोठामा आउँदा उनको शरीरमा सेतो पाइजामा र बनियान थियो। “अब चाहिँ आनन्दकासाथ बस्ने र पिउने, सुन्ने सुनाउने है त।” दुईवटै गिलासमा मदिरा भरिसकेपछि एउटा गिलास अप्सरातिर बढाउँदै भनेका थिए मनोरञ्जनले। दुबैले काजु र ओखर सँगसँगै दुई तीन घुँट मदिराको स्वाद लिएपछि भनेका थिए, “ल सोध के के सोध्नु मन छ तिमीलाई मसँग तर फेरि सम्बन्धलाई नाम दिनुपर्छ चाहिँ भन्ने होइन, मैले भन्दिएको छु” मनोरञ्जनले भने। “म आज तपाईसँग अर्कै कुरो सोध्छु। तपाईले नढाँटी भन्नुपर्छ है त?” अप्सराले आफ्नो हात मनोरञ्जनको हातबाट नछुटाएर भनेकी थिइन्। “उसो भए सोध के सोध्न मन छ । थाहा छ मलाई कति माया गर्नुहुन्छ ? भन्ने त होला नि... ठिक छ सोध म उत्तर दिन तयार छु ।” त्यति भनेपछि अप्सराको दुबै हात चुमेका थिए मनोरञ्जनले । “तपाईं साँच्चै नै मलाई अति नै माया गर्नु हुन्छ होइन...?” अप्सराले सोझै मनोरञ्जनको आँखामा हेरेर प्रश्न गरेकी थिइन्। “ल हेर, मैले भनेको होइन तिमी यही प्रश्न गछ्याैँ भनेर। अरे बाबा! माया नगर्ने भए म भेट्न आउथेँ त...? तिमीलाई थाहा छ खुकुरीको धारमा हिँडेको जस्तै छ यो सम्बन्ध मेरा लागि तर मेरो निम्ति यो मदिरा भन्दा पनि मादक छौं तिमी। मलाई त यो मदिराले लठ्याउँछ।” अप्सरालाई आफ्नो अँगालोले बेर्दै भनेका थिए मनोरञ्जनले। “पख्नु...। मलाई प्रश्न त गर्न दिनुहोस्।” भन्दै अप्सराले विस्तारै आफ्नो शरीर मनोरञ्जनको अँगालोमा ढल्काइन्, साथै मनोरञ्जनको आँखामा हेरेर भनिन्, “सत्य–सत्य भन्नुहोला नढाँटीकन, मलाई जस्तै तपाईंले तपाईंकी श्रीमतीलाई आफ्नो अँगालोमा बेरेका बेला के उनको ठाउँमा तपाईंले मलाई देख्नुहुन्छ?” “कस्तो वाहियात प्रश्न हो यो? बेला न कुबेला... पागल त भएकी छैनौ...? उनी मेरी विवाहिता पत्नी हुन्। अग्निलाई साक्षी राखेर समाजको अघि स्विकारेका हौं हामीले एक अर्कालाई।” अप्सराको प्रश्न सुन्नासाथ एकाएक आगोको लप्काले छोइएको जस्तो गरेर तर्सेर अप्सराको काँधबाट आफ्नो हात हटाउँदै भनेका थिए मनोरञ्जनले। “मलाई थाहा थियो। थाहा थियो मेरो प्रश्नको उत्तर यही र यस्तै हुनेछ भनेर। खुशी लाग्यो। धेरै खुशी लाग्यो। अन्ततः तपाईंले सत्य बोल्नुभयो भनेर।” रुञ्चे हाँसो हाँस्दै भनेकी थिइन् अप्सराले। केहीबेरपछि सदाको झैँ मनोरञ्जन र अप्सरा दुवैले सामान्य व्यवहार देखाउँदै खानपान गर्न थालेका थिए। त्यसपछि त्यो रात पनि अघि अघि भेट हुँदा बिताएका रातहरू जस्तै मदिरा सङ्गीत, गरिष्ठ खान्की अनि एक अर्कामा लिप्त भएर बिताएका थिए मनोरञ्जन र अप्सराले। अर्कोदिन एकाबिहानै मनोरञ्जन ब्यूँझदा अप्सरा मस्तसँग निदाइरहेकी थिइन्। केहीबेर पछि मनोरञ्जन हातमुख धोएर लुगा फेरीवरी तयार हुँदासम्म पनि अप्सरा सुति नै रहेकी थिइन्। “गुड बाइ ...।” कोठाबाट निस्किनुअघि मनोरञ्जनले अप्सराको गालामा बिस्तारै थपथपाएर गएका थिए। त्यसपछि करिब १५ दिनका लागि मनोरञ्जन अफिसियल कामले गर्दा बैंकक जानुपरेको थियो। अप्सरासँग छुट्टिएको अठारौं दिनमा साँझ ढल्केपछि मनोरञ्जन पुगेका थिए अप्सरा बस्ने अपार्टमेन्टमा। त्यहाँ पुगेपछि उनले ढोकाको घण्टी बजाए तर निकैबेर हुँदासम्म पनि ढोका खुलेन। केहीबेर कुरेपछि उनले खल्तीबाट आफुसँग भएको डुप्लिकेट साँचो निकालेर ढोका खोलेर भित्र पसे र फेरि भित्रबाट ढोका बन्द गरे। कोठा चकमन्न थियो। मनोरञ्जनले बिस्तारे अप्सरा ...! भनेर बोलाए तर अहँ..., कतैबाट केही आवाज आएन। उनी अघि बढे र बेडरुम, बाथरुम, किचेन र स्टोररुम सबै हेरे। अप्सरा कतै पनि थिइनन्। केही सोचेपछि मनोरञ्जन फेरि बेडरुममा पसे र त्यहाँ भएको लुगा राख्ने गरेको दराजनेर गए र बिस्तारै ढोका ताने। ढोका खुल्लै रहेछ, सजिलै खुल्यो तर त्यहाँ पहिलेका झैँ टन्नै लुगा थिएन। ह्याङ्गरमा केही लुगा झुन्ड्याइएका थिए भने दराजको ताकमा केही लुगाहरू असरल्ल अवस्थामा थिए। मनोरञ्जनको मनमा चिसो पस्यो। अचानक उनको आँखामा दराजमा कपडाको थाकमाथि राखेको एउटा खाममा पर्‍यो। मनोरञ्जनले त्यो खाम हातमा लिए। खामभित्र पत्र जस्तो देखियो। उनले त्यो पत्र निकालेर हातमा लिए अनि बैठक कोठामा आएर सोफामा बसेर पत्र पढ्न थाले। पत्रको सिरानमा प्रश्नवाचक चिन्ह मात्र थियो। प्रश्नचिन्हको ठिक मुन्तिर लेखिएको थियोः तपाईंसँगको कुनै साइनोबिना नै करिब आठ वर्ष बितेछ। धेरै पटक मैले तपाईंलाई हाम्रो सम्बन्धलाई एउटा नाम दिउँ भनेकी थिएँ तर तपाईंले मेरो कुरालाई हाँसोमा उडाउनु भएको थियो। तपाईंलाई थाहा छ मलाई हाम्रो गाउँकी एउटी फुपू पर्नेले तपाईंको घरायसी काममा सघाउने भनेर ल्याइदिएकी थिइन्। घरको विभिन्न अवस्था, रोगीनी आमा र दुई भाइबैनीको उज्ज्वल भविश्यको सपना देखाएकी थिइ् ती फुपूले। “तैले मालिक्नीलाई कामले रिझाउन सकिस् भने उहाँले तँलाई स्कूल पढ्न पनि पठाउनु हुनेछ।” उहाँले भन्नुभएको थियो। पढे लेखेर ठुलो मान्छे हुने रहर पालेर बसेकी मलाई फुपूको सल्लाह मान्नु नै ठीक लाग्यो। मैले गाउँको स्कुलबाट कक्षा आठको जाँच सकाएकी थिएँ। त्यसपछि म यहाँ आएर तपार्इंहरू कहाँ काम गर्न थालेँ। भर्खर १५ वर्ष पुगेर १६ वर्ष किशोरी। मीठो खाउँ... राम्रो लाउँ भन्ने मन। मालिक्नीले अह्राएको काम मन लगाएर गर्थें। मेरो काम देखेर मालिक्नी साँच्चै नै खुसी हुनुभयो र मलाई स्कुल भर्ना गरिदिनुभयो। स्कूल पढ्न पाएपछि म फुरुङ्ग परेँ अनि मेरो काम देखेर मालिक्नी खुसी हुनभएको थियो। त्यै भएर होला उहाँले मलाई आफ्नो छोरीजस्तै माया गर्न थाल्नुभयो। मालिक्नीले दिएका ती राम्रा राम्रा कपडा लाउन पाउँदा र बैनीलाई पनि पठाइदिन पाउँदा म अत्यन्त खुशी हुने गरेकी थिएँ। फुपूले अर्कै ठाउँमा काम गर्ने गरेको भएपनि महिनामा एक पटक आएर मलाई भेट्नुहुन्थ्यो अनि मालिक्नीले मेरो भाग तलब उनकै हातमा दिने गर्नु भएको थियो। मेरी आमालाई महिनैपछि मेरो तलबमा पाएको पैसा पठाउने काम फुपूले नै गर्नु भएको थियो। “हरे...! तँलाई तेरी फुपूले त्यहाँ लगेर काममा नलगाइदिएको भए हाम्रो के गति हुने थियो होला। तेरा भाइ बैनीले पढ्न पनि पाउँदैनथे होलान्। धन्य भाग्यले साथ दियो र आज तँ पनि सहरमा बसेर पढ्न पाएकी छस्।” दशैँको बेला म घर जाँदा आमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी तपाईंको घरमा काम गर्दा गर्दै मैले कक्षा नौ को जाँच पनि सकेँ। “अहो.....! तिमी त यो कपडामा हिरोइन जस्ती देखिएकी छौ त।” पहिले पहिले मतिर खास ध्यान नदिने गरेको मान्छे एकदिन पत्नीकै अघि तपाईंले मेरो रूपको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। म लाजले त्यसै त्यसै खुम्चिएकी थिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा मलाई लाग्दथ्यो, म भित्र बाहिर गर्दा अथवा घरको काम गर्दा तपाईंका आखाँहरूले मलाई पछ्याइरहेका छन्। बेला बेलामा म आफैसँग झस्किने गर्दथेँ । एक प्रकारको डर पनि लाग्दथ्यो मलाई तर के को डर...? कस्तो डर? थाहा थिएन। पछि पछि घरका सदस्यहरूको आँखा छलेर कहिलेकाहीँ चकलेट पनि दिन थाल्नुभएको थियो तपाईंले मलाई। चकलेट मलाई मन पर्थ्यो। मालिक्नीलाई भन्न डर लाग्थ्यो त्यसकारण लुकेर खान्थेँ म ती चकलेट। कहिलेकाहीँ पैसा पनि दिन थाल्नुभयो तपाईले मलाई। म ती पैसा लुकाएर राख्थेँ र स्कूल जाँदा के के किनेर खान्थेँ। एकदिनको कुरा हो, म त्यो दिन फुपूसँग गाउँ जानको लागि तयार भएर मालिक्नीको अघि उभिएकी थिएँ। त्यै बेलामा तपार्इं त्यहाँ आउनुभयो र फुपू र मालिक्नीको पछाडि उभिनु भयो। मेरा आँखा तपाईंका आँखा अनायासै जुधेका थिए। त्यति नै बेला मतिर हेर्दै बायाँ आँखा झमक्क झम्काउनुभयो। म लाजले रातो पीरो भएँ। तपाईं मुसुक्क हाँस्नुभयो। म हुत्तिएर भान्सा कोठातिर गएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईं बढीभन्दा बढी मेरो नजिक देख्न थालेकी थिएँ तपाईंलाई। अहिले लाग्दछ, मसँग नजिक हुने स्थितिको सृजना तपाईं आफै गर्नुहुन्थ्यो। तपाईंले हतार गर्नुभएन मात्र एउटा लक्ष्य लिएर मलाई आफ्नो मृदु मुस्कान र मीठा कुराहरूले लोभ्याइरहनुभयो। तपाईंकी श्रीमती मेरो इमान्दारिता र फुर्तिलो काम गराइबाट प्रभावित भएर मलाई छोरी सरह व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो।
यस पटक जब म दशैँमा गाउँमा गएकी थिएँ, त्यतिबेला मेरी बहिनीले भनेकी थिई, “दिदी तिमीले शरीर बेचेर हामीलाई पढाएकी छ्यौ भन्ने थाहा भएको भए हामी बरु पढ्ने नै थिएनौं। तिमीले गर्दा गाउँमा सबैले हामीलाई कति वचन लगाउँछन्, त्यो तिमीलाई के थाहा? पर्सीको दशैँ पर्खेर नबसे हुन्छ, गै हाल त्यही नर्कमा, जहाँ तिमी रमाएर बसेकी छौ। तिमी घर आएको थाहा पाएर भाइ घर फर्केकै छैन।”
तपाईंको घरमा घरायसी काम सगाउँदा सगाउँदै मैले दश कक्षा उत्तीर्ण गरें। मलाई मालिक्नीले आफैले उच्च माध्यमिक स्कुलमा लगेर ११ कक्षामा भर्ना गरिदिनुभयो। खुशीले म त्यसै त्यसै फुरुङ्ग परेकी थिएँ। स्कुलमा सबै केटाहरूले मलाई नै हेरिरहेको झैँ लाग्दथ्यो। यता घरमा पनि मालिक्नीको र अरूको अनुपस्थितिमा तपाईं मसँग ठट्टा गर्न सुरू गर्न थाल्नुभएको थियो। हुँदा–हुँदा कहिलेकाहीँ त मलाई एकान्तमा भेट्ना साथ राम्री...! भन्दै मेरा गाला समातेर तान्ने पनि गर्न लाग्नुभएको थियो। “भनिदिन्छु ...। म अनुहार रातो पारेर भन्थेँ।” “भन्देऊ न त म उनकै अघि गाला तान्नेछु।” तपाईं हाँस्दै भन्नुहुन्थ्यो। अहिले लाग्छ, मैले साँच्चै नै त्यति बेला तपाईंले मलाई जिस्काउँदा प्रयोग गरेका शब्दहरू, तपाईंले मेरो गाला तानेको कुरो सबै भनिदिनु पर्दोरहेछ तर किन किन म चुप रहेँ। दिन बितिरहेको थियो। पढाइमा म ठिक ठिकै थिएँ। फेल कहिल्यै भइनँ। तपार्इंका छोरी र छोरो कलेज पढ्दै गर्दा म बाह्रमा पढ्दै थिएँ। तपार्इं प्रायः जसो कार्यालयको कामले १०–१५ दिनको लागि अर्को जिल्लामा जानुहुन्थ्यो र घर फर्किंदा आफ्ना छोराछोरीका लागि नयाँ खेल्ने खेलौना र थरिथरिका चकलेट ल्याइदिनुहन्थ्यो। त्यो देख्दा म गाउँमा पढ्दै गरेका मेरा भाइ र बहिनीलाई सम्झिने गर्दथें। मन त्यसै त्यसै अमिलिएर आउँथ्यो। म राति तपाईंकी छोरी सुत्ने कोठाको एउटा कुनामा ओछ्यान लगाएर सुत्ने गरेकी थिएँ। मलाई मालिक्नीले सुरुदेखि नै रातपरेपछि त्यही कुनामा भुर्इंमा ओछ्यान बनाएर सुत्ने र बिहान सबै ओछ्यान पट्टयाएर एउटा कुनामा राम्रो तन्नाले ढाकेर राख्न भन्नुभएको हुनाले म त्यसै गर्दथेँ। एक दिनको कुरो हो, त्यो दिन कसैले तपाईंका घरका सबै सदस्यहरूलाई रातिको खाना खानका निम्ति निम्तो गरेका थिए। मालिक्नीले मलाई पनि आजसँगै लाने हुनुभयो। तपाईंकी छोरीले छिटछिटो कपडा फेरिन्, र कोठाबाट बाहिरिइन्। म चाहिँ भर्खरै लाइसकेको कपडा अलि नसुहाएको जस्तो लागेर त्यो खोलेर अर्को कुर्ता लाउने जमर्को गर्दै थिएँ, त्यति नै बेला मैले तपाईंलाई ढोकामा उभिएको देखेँ। म लाजले भुतुक्कै भएँ, र त्यही कुर्ताले आफ्नो पेटको माथिल्लो भाग छोपेँ। तपार्इं मुसुक्क हाँस्नुभयो र सरी भन्दै त्यहाँबाट जानुभयो। त्यसपछि जति–जति बेला तपाईंसँग मेरो आँखा जुद्थ्ये, त्यति त्यति बेला तपाईं आफ्ना दुवै आँखीभौँ उचालेर मतिर हेरेर हाँस्नुहुन्थ्यो। म मरे तुल्य हुन्थेँ। त्यसरी हामी एकअर्कासँग नबोल्दा नबोल्दै पनि कता–कता मौन भाषामा जोडिएकाझैँ भएका थियौं। एकदिन अचानक मालिक्नीको हीराको हार हरायो र सबैले खोज्दा तपाईंको छोराले त्यो मेरा ओछ्यानभित्र भेटायो। म छक्क परेँ। म आत्तिएँ, रोएँ, “मैले चोरेको होइनँ” भन्दै अनेकथरिको कसम खाएँ तर उहाँ तपाईंहरू कसैले पनि मेरो कुरो पत्याउनु भएन। अर्को दिन तपाईँहरूले मेरो कपडासहित मलाई मेरी फुपूको साथ लगाएर मलाई घरबाट निकाल्नुभयो। “हेर...। त्यस्ता मनकारी मान्छेको घरमा काम गरेर तैँले आफु पढ्ने मात्र होइन, तेरा भाइ बहिनीलाई समेत पढाउन पाएकी थिइस्। तेरी पोई मरेको बिधवी आमाको रोगको उपचार खर्च समेत पाएकी थिइस्, तर आज तेरो मुर्खताले र लोभले गर्दा छँदा खाँदाको जागिर गयो” भन्दै फुपूले बेस्सरी हकार्नुभयो। मलाई मैले फुपूलाई पनि आफू निर्दोष रहेको कुरो भनेँ तर उहाँले पनि पत्याउनु भएन। म हतास भएकी थिएँ। तपाईंको घर छाडेको दोस्रो दिन बेलुका झमक्क परेपछि तपाईं हामी बसेका डेरामा आउनुभएको थियो। तपाईंले मेरी फुपूसँग धेरैबेरसम्म कुरो गर्नुभयो। मलाई तपाईंको अघि बस्न लाज लागेको हुनाले मभित्र अँगेनो भएको ठाउँमा गएर चुपचाप बसिरहेकी थिएँ। “धन्य मालिकको मन कमलो रहेछ। उहाँले तँलाई होस्टेलमा राखेर बाह्र कक्षासम्म पुरा पढाइदिने भन्नुभएको छ। त्यै भएर भोलि तँ र म मालिकसँगै गएर तँलाई होस्टेलमा राख्ने अरे। तेरो स्कुलमा पढ्ने अरू केटीहरू पनि बस्छन् अरे त्यही होस्टेलमा।” तपाईं गएपछि फुपूले मसँग भन्नुभएको थियो। “अनि घरमा आमालाई भन्नुपर्यो नि!” मैले भनेकी थिएँ। “मालिकले भन्नुभएको अहिले हामीले घरमा केही नभन्ने अरे। तेरी आमालाई सित्थैमा किन पीरमाथि पीर थपिदिने। तैले बाह्र कक्षाको जाँच दिएपछि उहाँले तेरो लागि एउटा सानोतिनो जागिर खोजिदिउँला पनि भन्नु भएको छ। मान्छे त साँच्चै देउताजस्ता रहेछन्। त्यस्ताका घरमा तँ टिक्न सकिनस्।” फुपूले सहज रूपमा भन्नु भएको थियो। त्यसपछि म सात महिना जति होस्टेलमा बसेर पढें। परीक्षा पनि राम्रो भयो। त्यो ६ महिनाको अवधिभित्रमा तपाईंले पटक–पटक मलाई भेट्नुभयो। मलाई खाने कुरा, कपडा र पैसा दिने गर्नुभयो र कहिलेकाहीँ मलाई आफ्नो गाडीमा राखेर सहरदेखि टाढा डुलाउन पनि लग्नुभयो तर हामीबीच हीराको हारबारे कहिल्यै कुनै कुरा भएन। सत्य के हो भने म सहरमा बसेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्थेँ। त्यसको केही दिनपछि फुपूले डेरा छोडेर गाउँ जान अगावै तपाईंले मलाई सहरदेखि निकै टाढा भएको एउटा नवनिर्मित अग्लो अपार्टमेन्टको एउटा फ्ल्याटमा लिएर जानुभयो। त्यहाँ पुगेपछि तपाईंले कोठाको साँचो मेरो हातमा राखिदिएर भन्नुभएको थियो, “लौ यो साँचो, आजबाट यो घर तिम्रो भयो। यहाँ मैले तिमीलाई आवश्यक पर्ने सारा सामानहरूको बन्दोबस्त गरिदिएको छु। मनभित्रको खुशीलाई सञ्चित गर्दै मैले ढोका खोलेँ र भित्र पसेँ अनि कोठाभित्रको सुन्दर सजावट र कलात्मक सरसामानहरू हेर्दै सबै कोठाहरू चहारेँ। अहो...! म कति खुशी भएकी थिएँ त्यसबेला, त्यो बयान गर्ने शब्द छैनन् मसँग। बस् खुशीले छचल्किएका आँखा लिएर “थेङ्क्यु...!” भन्दै मैले तपार्इंलाई अँगालो मारेकी थिएँ। त्यो दिनदेखि म तपार्इंकी पूर्णकालीन रखौटीमा रूपान्तरित भएकी थिएँ। समय बित्दै गयो। जब–जब तपाईंलाई मेरो देहको प्यास लाग्दथ्ये, तब–तब तपार्इं मदिराको बोतल र मेरा लागि उपहार लिएर म बसेको फ्ल्याटमा रात बिताउन आउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ अपार्टमेन्टमा बस्ने अन्य छरछिमेकीहरू मसँग निकट हुन खोज्दथे तर म कहिल्यै उनीहरूसँग खुलेर बोल्न सकिन। मेरो कलेजको पढाइ आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेको थियो। समय बित्दै जाँदा छिमेकका केही महिलाहरूसँग मेरो दोहोरो कुरो हुन थालेको थियो। उनीहरूले मसँग घुमाउरो किसिमले तपाईं र मेरो सम्बन्धलाई लिएर खोतल्न थालेका थिए। मलाई थाहा थियो, म जस्ती एक्लै बस्ने युवतीबाट समाजले धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्दछ। मैले जीवन जिउनुलाई जति सजिलो ठानेकी थिएँ, यो त्यति सहज रहेनछ! मेरा छिमेकी पुरुषहरूको लोलप दृष्टिले मलाई कसरी खेदिरहेका! कतिले त मलाई एकान्तमा देख्नासाथ बडो निर्लज्जतापूर्वक अश्लील सङ्केत गरेर घिनलाग्दो प्रस्ताव राख्न समेत पछि पर्दैनथे। जब म अत्यन्त दुःखी र हतास भएर आफूमाथि भएका ती सब कुराहरू भन्दथेँ, त्यतिबेला तपार्इंले मेरा गुनासाहरूलाई वास्ता नगरेर हाँसोमा उँडाउनुहुन्थ्यो। म आहत हुने गर्दथेँ तपाईंले मेरा गुनासाहरूको वास्ता नगरेको देखेर। सत्य भन्ने हो भने म भित्र कता–कता तपार्इंप्रति घृणाको भाव जाग्न थालेको थियो। म मनमनै तपाईंको व्यवहारबाट विरक्तिँदै थिएँ। मलाई अझ पनि याद छ त्यो दिन...। त्यो क्षण जब मैले प्रथम पटक आँखाभरि आँशु भरेर भनेकी थिएँ, “कतिदिन कति समयसम्म तपाईंसँगको यो अनैतिक सम्बन्ध लिएर म बाँचिरहूँ? अब त हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई एउटा औपचारिक नाम दिनुपर्छ। मानिसहरूले मलाई सौतामाथि गएकी आइमाई भनेर लाल्छना लगाए तापनि मेरो सन्तानले पिताको नाम पाउनेछ। “पागल नबन...! बौलाही भयौ कि क्या हो? जे छ, त्यसैमा रमाएर बस्न सिक। सबथोक त पुगेको छ नि तिमीलाई। हाम्रो सम्बन्धको नाम किन चाहियो तिमीलाई?” हो त्यो दिन..., त्यही क्षण तपाईंका शब्दहरूले मलाई मेरो दयनीय स्थितिको बोध गराएको थियो। मैले स्पष्ट रूपले आफु उभिएको धरातल अनुभूत गरेकी थिएँ। एउटा विधवी नारीले जसोतसो दुःख सुख गरेर घर चलाएकी परिवेशमा हेर्केकी थिएँ। म सानैदेखि महत्वाकांक्षी भएकी हुनाले जे–जसो गरेर भए पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र भाइ, बैनी र आमालाई सुख दिन चाहन्थेँ। मेरो उर्लंदो चाहनालाई फुपू, तपार्इंकी श्रीमती र तपाईं सबैले आआफ्नो किसिमले टेवा दिनुभयो। तपाईंकी श्रीमतीलाई मैले आफ्नो श्रम र इमान्दारिताले रिझाउन सकेकी थिएँ। मेरो लागि त्यतिखेरको जीवन अनौठो र आनन्दमय थियो। साँच्चै भन्ने हो भने म त्यसबेला कुमालेले कुनै वस्तुको आकार दिनभन्दा अघि मुछेर राखेको आलो काँचो माटो जस्तै थिएँ। म खूब धेरै पढेर भाइ बैनीलाई पढाएर र आमाको हेरचाह गरेर एउटा सम्मानित र सुखी जीवन जिउन चाहन्थेँ तर मलाई थाहा थिएन तपाईंको सुन्दर व्यक्तित्व र मिठासपूर्ण स्वरूपमा मेरो जीवनमा राहुले प्रवेश गरिसकेको छ भनेर। तपाईंको कलाकारिता र इच्छा अनुसार मेरो जीवन पद्धतिको निर्माण भयो। म तपार्इंको देह सुख प्रदान गर्ने साधन भएँ। जति–जति समयको पाइला अघि बढ्दै गयो र मैले शिक्षा हासिल गर्दै गएँ, मभित्र आफु को हुँ र आफु कुन स्थितिमा छु भन्ने कुराको बोध हुँदै गयो। मैले मेरो दोहोरो जीवनको अर्थ बुझ्दै गएँ। मैले समाजमा बसेर एउटा सम्मानित र अपमानित जीवन जिउनुको अर्थ बुझ्दै गएँ र अन्त्यमा एउटा अठोट गर्ने निर्णय लिएँ। तपाईं र तपाईंको खोक्रो सम्बन्धबाट छुट्कारा लिने। मभित्र स्वतन्त्र भएर जिउँने जीजिविषा पलायो। अन्तिम पटकको हाम्रो भेटमा मैले हाम्रो सम्बन्धको नामबारे फेरि प्रसङ्ग उठाएकी थिएँ। तपाईंले सदाको झैँ मेरो प्रश्नलाई हाँसो र व्यङ्ग्यमा उडाउनुभयो। अब मैले यो अनैतिक सम्बन्धबाट अलग्गिएर एउटा स्वतन्त्र र सार्थक जीवन बिताउने निर्णय गरें, र तपाईंको जीवनबाट म सदाको निम्ति जाँदैछु। मेरो आफ्नो विगत जीवनप्रति मलाई किञ्चित मात्र पनि घृणा छैन, न त म आत्महत्या गर्नेछु। म यही यसै समाजमा बसेर मेरा सारा सपना पूरा गर्नेछु। यस पटक जब म दशैँमा गाउँमा गएकी थिएँ, त्यतिबेला मेरी बहिनीले भनेकी थिई, “दिदी तिमीले शरीर बेचेर हामीलाई पढाएकी छ्यौ भन्ने थाहा भएको भए हामी बरु पढ्ने नै थिएनौं। तिमीले गर्दा गाउँमा सबैले हामीलाई कति वचन लगाउँछन्, त्यो तिमीलाई के थाहा? पर्सीको दशैँ पर्खेर नबसे हुन्छ, गै हाल त्यही नर्कमा, जहाँ तिमी रमाएर बसेकी छौ। तिमी घर आएको थाहा पाएर भाइ घर फर्केकै छैन।” म स्तब्ध भएकी थिएँ, मेरी बहिनीका ती कुरा सुनेर। त्यो रात म एक्लै रुँदै बसेकी थिएँ ओछ्यानमा। आमा चाल मारेर मेरो कोठामा पस्नु भएको थियो। “आएदेखिको अन्नको गेडो पसेको छैन तेरो पेटमा। खाऊ! छोरी नरोऊ। भोलि बिहान भाइ आउनुभन्दा अघि गैहाल यहाँबाट।” त्यति भन्दै मेरो अघि भातको थाल राखिदिनु भएको थियो। त्यो क्षण मैले आमालाई गम्लङ्ग अँगालो हालेर रुँदै भनेकी थिएँ, “आमा मेरो दोष छ त...?” “छैन छोरी, छैन तेरो दोष छैन। यो हाम्रो कर्मको दोष हो। म पनि तँ सँगै जाने थिएँ तर...।” बोल्दा बोल्दै आमाको स्वर अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि त्यो रात हामी आमा छोरीले एक अर्काको अँगालोमा रहेर आँशु बगाइरह्यौं। मलाई थाहा छ, रातको अन्धकारमा तपाईंले मलाई खोज्दै मकहाँ आउने गरेको भए तापनि दिनको उज्यालोमा तपाईं मेरो सामु आफ्नो असली रूप देखाउने सामर्थ्य राख्नुहुन्न। तपार्इंमा सत्यसँग सामना गर्ने हिम्मत छैन। म आज यसै क्षण तपाईंसँग जोडिएको एउटा घृणास्पद बेनामी सम्बन्धको दृश्यलाई सदाका निम्ति यहीँ पटाक्षेप गर्दैछु। प्रसिद्ध कथाकार माया ठकुरी नेपाली समाजमा नारीले भोग्न बाध्य पारिएका विषयका आधारमा सामाजिक उत्थानका लागि नारी अस्तित्वको स्थापनाका निम्ति जागरुक लेखन गरिरहन्छिन्। उनको ‘बेनामी सम्बन्ध’ कथा आजको समयमा आर्थिक अभाव, सामाजिक शोषण र अस्तित्वको प्रश्नमा अल्झिएका युवतीका अत्यन्त पीडादायी विषयमाथि लेखिएको यथार्थवादी कथा हो। समाजमा यस्ता समस्यामा परेका युवतीका लागि स्वअस्तित्वको मार्ग चुन्न आँट र हौसला दिने यस कथालाई प्रकाशित गर्ने अनुमति दिएकामा कथाकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौं। –नेपाली पब्लिक
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २६, २०७५ ०५:४४